သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ — Steemkr
htoolay33 in esteem
သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၏အမျိုးမျိုးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုနောက်တဖန်အချိန်နှင့်ဖော်ပြထားပါပြီ။ မျက်နှာပြင်အဆင့်တွင်, သင်ရုံသင်ကပိုမိုနက်ရှိုင်းကြည့်ရှုသူတို့နှင့်အတူတဦးတည်းခံစားရအဖြစ်ဤအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အနည်းငယ်သို့သော်သင်သည်သူတို့သည်ငါတို့ဖြစ်တည်မှုများအတွက်အလွန်မရှိမဖြစ်ဘယ်လောက်သိကြလိမ့်မည်မြင်ရလိမ့်မည်။
သစ်ပင်များ၏စပါးစိုက်ပျိုးချိန်ပံ့ပိုး NGOs များ
သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးနေဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်စိမ်းလန်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ဖို့တာဝန်တက်ယူကြပြီကြောင်းမဟုတ်သောအမြတ်အဖွဲ့အစည်းများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ဤအဖွဲ့များလည်းသစ်ပင်များ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းတား။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီဦးတည်ချက်အတွက်အလုပ်လုပ်နေသည့်အဲန်ဂျီအိုများ၏တချို့က Sankalp Taru ဖောင်ဒေးရှင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လူငယ်န်ဆောင်မှုများ, ပြောရမည်မှာသစ်ပင်များ, သစ်ပင်များတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း, အစိမ်းရောင် Yatra, သစ်တောပြန်လည်ပျိုးထောင်အိန္ဒိယ, အစိမ်းရောင်ဘဝကအိန္ဒိယနှင့်ပင် Plantation ပါဝင်သည်။
ထိုအန်ဂျီအိုအဖွဲ့၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုလူတွေ sensitize ဒါလုပ်နေတာမှာသူတို့ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် supporting မြောက်မြားစွာကလူကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပိုမိုစိမ်းလန်းအောင်လက်အားပူးပေါင်းခဲ့ကြနှင့်ဤဦးတည်ချက်အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ စိမ်းလန်းသောပျံ့နှံ့ဤအဖွဲ့အစည်းများသည်စက်ရုံသစ်ပင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူများသည်။ အခြိနျမှနျမှသူတို့မှာလည်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပိုပြီးလူတွေကိုအားပေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကို run ။
ကျနော်တို့အကြောင်းမရှိထောကျပံ့ရနျကြှနျုပျတို့၏အနီးအနားဧရိယာ၌သစ်ပင်များစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဓိကခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ကြဉ်းလိုလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကျွန်တော်တစ်ဦးအကြီးစားအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကဤ NGOs များပူးပေါင်းရပါမည်။
သစ်ပင်များစိုက်ပျိုး၏အကျိုးကျေးဇူးများ Sensitized ရမည်ဖြစ်သည်
အစိုးရသူတို့ကိုသစ်ပင်များစိုက်ပျိုး၏အရေးပါမှုကိုပြန့်ပွားကိုကူညီ non-profit အဖွဲ့အစည်းများကိုထောကျပံ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစပင်တို့၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးကန့်သတ်ထားရပေမည်။ သူတို့တစ်တွေလျင်မြန်စွာအရှိန်အဟုန်မှာရက်ရက်စက်စက်ဖြတ်လျှင်စပါးစိုက်ပျိုးသစ်ပင်များအလုံအလောက်ဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့အပေါ်အဓိကထားခြင်းဖြင့်ပိုပြီးသစ်ပင်များစိုက်ပျိုး၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး sensitized ရမည်ဖြစ်သည်။ တူ၏ဝါဒဖြန့်ရေဒီယို, ရုပ်မြင်သံကြား, သတင်းစာ, လူမှုရေးမီဒီယာ, သိုလှောင်ခြင်းနှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အဆိုပါအဲန်ဂျီအိုများ၏အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုဤအနတ်ကတော်များ၏လမ်းဖြင့်ပျံ့နှံ့ရပါမည်။ အခုပြဿနာကိုများစွာသောလူကဒီဦးတည်ချက်အတွက်အလုပ်လုပ်ချင်သော်လည်းသို့သော်သူတို့နည်းနည်းအထောက်အကူပြုပိုင်ခွင့်နည်းလမ်းများမသိကြပါသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ဒါဟာအလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. သစ်ပင်များစိုက်ပျိုး၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားများသင်ပေးဖို့လည်းကောင်းတယ်။ ပညာပေးဌာနအခြိနျမှနျမှတာဝန်ရှိသူတို့၏ကျောင်းသားများကိုပါဝငျခွငျးအားဖွငျ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရန်ပဏာမခြေလှမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်စကားပုံပြည်နယ်များအဖြစ်, "သစ်ပင်တပင်ကိုစိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်နှစ်ပေါင်း 20 အကြာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအကောင်းဆုံးအချိန်ယခုဖြစ်၏။ "ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ bit နဲ့လုပျမြားနှငျ့ဤအရပ်ဌာနကိုပိုပြီးလှပပါစေ။
esteem good-karma benefits planting trees
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
Congratulations @htoolay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
auelork41 · 3년 전
taitano41 · 3년 전
tnay43 · 3년 전